नेपाल आज | आफ्नो भौतिक औकात थाहा पाउनुहोस्
आफ्नो भौतिक औकात थाहा पाउनुहोस्
बुधबार, ११ बैशाख २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज
नीतिका कुरा गर्ने हो भने मान्छेका रुप, शक्ति, सौन्दर्य र विद्याका कारण घमण्ड बढ्छ । यी विशेषता हुनका लागि पहिलो त मान्छे नै हुनु पर्छ । एउटा मान्छेको भौतिक अवस्थिति कति ठूलो छ ? कति सानो छ ? आउनुहोस् आज रोचक तुलना गरौं ।
पाँच छ फुटको उचाई मानिसको औसत हो । यो शरिर विशालकाय हो, यदि हामीले यो शरिरलाई सुक्ष्म जीवहरुसँग तुलना गर्यौं भने । भ्यागुताको एउटा अण्डा एक मिलिमिटरको हुन्छ । दश मिलिमिटरको एक सेन्टिमिटर हुन्छ ।
भ्यागुताको अण्डा भन्दा आधा सानो अर्थात शुन्य दशमलव ५ एमएमको टार्डिग्रेड नामक जीव हुन्छ । एक कोषीय जीव अमिवाको आकार पनि यत्रै हुन्छ । यो भन्दा सानो पारामेसियम हुन्छ जुन २५० माइक्रोमिटर हुन्छ । एक सय माइक्रमेमिटरको एक मिलिमिटर हुन्छ ।
यो भन्दा पनि सानो डायोटोम्स हुन्छ । जसको आकार २०० माइक्रोमिटर हुन्छ । त्यो भन्दा पनि सानो युग्लिना हुन्छ, जसको आकार १३० माइक्रोमिटर हुन्छ । मानिसको अण्डाणु पनि यत्रै हुन्छ ।
मानव अण्डाणु भन्दा सानो न्युरोन (एक सय माइक्रोमिटर) हुन्छ । न्युरोन भन्दा सानो पोलेन (९० माइक्रोमिटर) हुन्छ । पोलेन भन्दा सानो मानिसको शुक्राणु (६० माइक्रोमिटर) हुन्छ । यो भन्दा पनि सानो मान्छेको छालाको कोष हुन्छ । जसको आकार ३० माइक्रोमिटर हुन्छ ।
यो भन्दा पनि सानो स्ट्याफ्लोकोकस अरेस हुन्छ जसको आकार एक माइक्रोमिटर मात्रै हुन्छ । यो थाहा पाएपछि तपाईलाई आफ्नो शरिर विशालकाय नै लाग्यो होला हैन ?
यहाँसम्म त ठूलाजीवहरुको संसार हो । अब पालो आउँछ अझै साना जीवहरुको महाना साम्राज्यको । यो साम्राज्यमा यति सदस्य छन् जसको हिसाब गर्ने सायदै कुनै गणितको विकास भएको छ ।
रातोरक्त कोषिका– ८ माइक्रोमिटर
ई.कोली – २ माइक्रोमिटर
ल्याक्टोब्यासिली –२ माइक्रोमिटर
स्ट्याफ्लोकोकस –१ माइक्रोमिटर
स्मलपक्स भाइरस– ०.३ माइक्रोमिटर
टिफोर ब्याक्टेरियोफेज– ०.२ माइक्रोमिटर
रेबिज भाइरस – ०.१५ माइक्रोमिटर
इन्फ्लुएन्जा भाइरस–०.१० माइक्रोमिटर
पोलियोभाइरस– ०.०३ माइक्रोमिटर
राइनोभाइरस – ०.०३ माइक्रोमिटर
यति विशाल पृथ्वीमा यस्ता सुक्ष्म जीवहरु कति होलान् कति । मान्छे नै ७ अर्ब पुगिसके भने बाँकीको के कुरा । ७ अर्ब मानिस त सानो भूगोलमा बस्छन् । ७५ प्रतिशत भागमा त पानी नै छ । बाँकी भागमा मानिस । यी पृथ्वमा सगरमाथादेखि प्रशान्त महासागरसम्म छ ।
पृथ्वीको ब्यास नै १२ हजार ७५६ किलोमिटरको छ । यो पृथ्वीका अगाडि तपाई आफूलाई राखेर कल्पना गर्नुहोस् त तपाई कत्रो देखिनु हुन्छ ? जसरी एउटा शरिरमा एउटा कोष हुन्छ, त्यस्तै हुन्छ पृथ्वीमा एउटा मानिस ।
तर पृथ्वी भन्दा १०९ गुणा ठूलो छ सूर्य । सूर्य एक तारा हो । सूर्यभन्दा आर्कटरस नामक अर्को तारा १६ हजार गुणा ठूलो छ । अल्फा स्कोर्पिया ए नामक तारा सूर्यभन्दा ६ करोड ९० लाख गुणा ठूलो छ । भिवाई क्यानिस मजोरिस नामक तारा त सूर्यभन्दा २ दशमलव २ अर्ब गुणा ठूलो छ ।
सूर्य १४ लाख किलोमिटर चौडाईको छ । तर यो सूर्य बस्ने आकाशगंगा एक लाख प्रकाश वर्षको चौडाईमा अबस्थित छ । यो आकारमा तपाई आफूलाई नबिर्सिनु होलदा । किनभने यसभित्र तपाईं पनि हुनुहुन्छ ।
मिल्कीवेको आकार त थाहा पाइहाल्नुभयो । यो कति विशाल छ भन्ने पनि बुझिसक्नु भयो होला । अब यस्ता आकाशगंगा ब्रम्हाण्डमा कति वटा होलान् ? आइसी १०११ नामक अर्को आकाशगंगा पनि छ । जसको जुन ६ लाख प्रकाशवर्ष चौडा छ । एउटा आकाश गंगामा अर्बौं ताराहरु हटाउँछन् । पृथ्वी भएको आकाशगंगामा पनि अर्बौ ताराहरु छन् ।
आकाशगंगाको संख्या कति होला ब्रम्हाण्डमा ? यसको एकिन जवाफ कसैसँग पनि छैन । तर खगोलशास्त्रीरुले विभिन्न आधारलाई टेकेर २ अर्बवटा आकासगंगा रहेको अनुमान गरेका छन् ।
२ अर्ब आकाशंगाभित्र तपाईंको अस्तित्व छ । अब एक पटक यी दुई अर्ब आकाशगंगाको अगाडि आफूलाई तुलना गर्नुहोस् त, के पाउनु हुन्छ ? अब बुझौं हामी मानिसको औकात कति छ ।
नेपालमा फेरि प्रवेश गर्‍यो पश्चिमी वायू, वर्षा र हिमपात सुरु